ट्यांकरको पानी पिउँदै हुनुहुन्छ ? – Sabaikoaawaj.com
ट्यांकरको पानी पिउँदै हुनुहुन्छ ?
सोमवार, चैत्र २८, २०७३ 8:36:31 PM	मा प्रकाशित
काठमाडौं ,२८ चैत/ काठमाडौंमा खानेपानी विक्री वितरण गर्दै आएका ट्यांकरहरुले अब अनिवार्य रुपमा दर्ता गरेर स्टिकर टाँस्नुपर्ने भएको छ । स्टिकर नटाँसिएका ट्यांकरले बैशाख ५ गतेदेखि पानी बेचेको भेटिएमा कारवाही गर्ने सरकारको तयारी छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको निर्देशनपछि काठमाडौं खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले पानी बेच्ने ट्यांकरमाथि कडाइ गर्न लागेको हो ।
काठमाडौंमा पानी विक्री गर्ने ट्यांकरहरुले खोलाको फोहोर पानी उपभोक्तालाई बेचेर स्वास्थ्यमा खेलवाड गरिरहेको भन्दै मन्त्रीले त्यसबारे निगरानी गर्न निर्देशन दिएको मन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दियो ।
मन्त्रीको निर्देशनपछि बोर्डले गरेको तयारी अनुसार अब पानी विक्री गर्ने ट्यांकरहरुले बैशाख ५ भित्र अनिवार्यरुपमा बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्ने छ । बोर्डले पानीको गुणस्तर अनुसार ट्यांकरलाई नीलो, पहेंलो र हरियो स्टिकर प्रदान गर्नेछ । र, त्यस्तो स्टिकल लागेका ट्यांकरले मात्रै पानी बेच्न पाउने छन् ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार फिजिकल, केमिकल र बायोलोजिकल हिसाबले शुद्ध पानी बिक्री गर्ने ट्यांकरले नीलो स्टिकर प्राप्त गर्ने छन् । नीलो स्टिकर लागेका ट्यांकरको पानी सीधै पिउन सकिने छ ।
पानी परीक्षण गर्दा फिजिकल र केमिकलको अवस्था सामान्य रहेको तर माइक्रोबायोलोजिकल परीक्षणमा गुणस्तरीय नदेखिएको पानी विक्री गर्ने ट्यांकरहरुले पहेंलो स्टिकर पाउनेछन् । यस्तो पानी उमालेरमात्रै पिउनुपर्ने हुन्छ ।
त्यसैगरी माइक्रो बायोलाजिकल परीक्षणमा सामान्य देखिने तर फिजिकल र केमिकल टेस्टमा अनुपयुक्त ठहरिएको पानी बेच्ने ट्यांकरलाई हरियो स्टिकर दिइने छ ।
हरियो स्टिकर लागेको ट्यांकरले बेचेको पानी हात खुट्टा धुनका लागिमात्रै उपयुक्त हुन्छ, पिउन वा भान्सामा प्रयोग गर्न मिल्दैन ।
राजधानीमा पानी विक्री गर्ने ट्यांकरहरुले कुनै परीक्षण नगरिएको खराब पानी उपभोक्ताहरुलाई बेचिरहेको गुनासो आएपछि मन्त्री शाहीले अनुमति नलिई पानी बेच्न प्रतिबन्ध लगाउने निर्देशन दिएको उनका प्रेस सहयोगी सुनिल सापकोटाले अनलाइखरलाई बताए ।
प्रकाशित मितिः सोमवार, चैत्र २८, २०७३ 8:36:31 PM